Caalamka, 10 April 2019
Arbaco 10 April 2019
Soomaalida iyo booliska Toronto oo kulmay
Qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada iyo booliska magaaladaas ayaa kulan isugu yimid.
Netanyahu oo markii 5-aad ra'iisul wasaare noqonaya
Ra’iisul Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa u muuqda in markii shanaad uu xilkaas qaban doono, ayada oo natiijooyinka doorashadii adkeyd ee dhacday talaadadii ay muujinayaan in xisbigiisa Likud iyo xulafadiisa Garabka Midig ay ku habboon yihiin inay soo dhisaan dowlad wadaag ah.
Sacuudiga iyo Iran oo ka jawaabay go'aanka Mareykanka
Sacuudi Carabiya ayaa maanta soo dhoweysay go’aanka Mareykanka uu ciidamada Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran ugu calaameeyey urur argagixiso.
Soomaalida Alberta, Canada oo Doorashada u Diyaargaroobeysa
Doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa gashey todobaadki ugu danbeeyey. Marka laga tago Ontario oo Soomaali door ahi ay degan yihiin, Alberta waa gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ee Canada ay ku nool yihiin.
Faiza Cali oo Musharax ka ah Calgary, Canada
Mudo labo todobaad ka yar oo ku aadan 16-ka April ayaa gobolka Alberta ee dalka Canada waxa loo dareerayaa maalinta codeynta doorashada. Hasa ahaatee waxaa jiro doono maalmo shan ah oo ay dadku codkooda horey u dhiiban karaan, Soomaali dhowr ahna waa ay ka sharaxan yihiin.
Sacuudiga oo xiray dad ay ku jiraan Mareykan
Boqortooyada Saudi Arabia ayaa maanta xabsiga dhigtay sideed qof oo u dhaq-dhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha, kuwaasoo labo ka mid ahi heystaan dhalashada dalka Mareykanka.
Soomaali musharaxiin ka ah dalka Canada
Ninkii muslimiinta laayey oo 50 dacwad lagu soo oogayo
Booliska dalka New Zealand ayaa sheegay in ay 50 kiis oo dil ah kusoo oogi doonaan, ninki 50 qof oo Mulimiin ah ku laayey laba masaajid oo ku yaalla dalkaasi bishii tagtay.
Shareecada Islaamka oo maanta ka dhaqan gashay Brunei
Midowga Yurub ayaa maanta cambaareeyey shareecada Islaamka ee maanta ka dhaqan gashay dalka Brunei, oo uu sheegay in ciqaabta “arxan-darrada ah” ee sharciga uu ogolaanayo ay ka dhigan tahay jirdil iyo jebinta heshiisyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha.
Xuutiyiinta oo Drone ku weeraray Sacuudiga
Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay inay ka hor-tagtay laba diyaarad oo drone ah, kuwaas oo Xuutiyiinta Yemen ay kusoo weerareen, hase yeeshee shan qof, oo uu ku jiro canug, ay ku dhaawacmeen burburka diyaaradahaas.
Soomaalida Canada iyo cudurka Autism-ka
Najib Razak oo la maxkamadeynayo
Hogaamiyihii hore ee dalka Malaysia Najib Razak ayaa maanta oo Arbaca ah maxkamad lasoo taagi doonaa, iyadoo loo heysto musuqmaasuq ah inuu lunsaday lacago malaayiin dollar ah.